Northrop B-2A ဝိညာဉ်တော်သည် AlphaSim FS2004 DOWNLOAD - Rikoooo
အရွယ် 10.8 ကို MB
downloads ရယူရန္ 10 602
အတွက် FSX/P3D ဗားရှင်း ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ
ယခု Litle အရည်အသွေးအဟောင်း payware ၏အံ့ဩခြင်းပေမယ့်အခမဲ့! အဆိုပါကို virtual B-52 တစ်ဦးကို virtual cockpit နဲ့ထုံးစံအသံရှိတယ်။ စစ်မှန်သောစစ်ဆေးရမည့်စာရင်းနှင့်ကိုးကား! အ Readme.txt Read
(အစ Stealth ဗုံးကြဲလေယာဉ်အဖြစ်လူသိများ) အ Northrop Grumman B-2 ဝိညာဉ်တော်သည်သိပ်သည်းဆန့်ကျင်လေယာဉ်ကာကွယ်ရေးထိုးဖောက်များအတွက်ဒီဇိုင်းအနိမ့် observable ကိုယ်ပျောက်နည်းပညာကို featuring အနေနဲ့အမေရိကန်မဟာဗျူဟာမြောက်ဗုံးကြဲလေယာဉ်သည် ဖြစ်. , ဒါကြောင့်သမားရိုးကျနှင့်နျူကလီးယားနှစ်ဦးစလုံးလက်နက်တွေနဲ့လုပ်ငန်းတွေစတင်ဖို့အတတ်နိုင်သည်။ အဆိုပါဗုံးခွဲသူနှစ်ဦး၏တစ်ဦးယာဉ်အမှုထမ်းရှိပြီးရှစ်ဆယ် 500 ပေါင် (230 ကီလိုဂရမ်) -class JDAM GPS စနစ်သုံးပဲ့ထိန်းဗုံးများ, ဒါမှမဟုတ်တဆယ်ခြောက် 2,400 ပေါင် (1,100 ကီလိုဂရမ်) B83 နျူကလီးယားဗုံးအထိ drop နိုင်ပါတယ်။ B-2 တစ်ဦးကိုယ်ပျောက် configuration ကိုအတွက်ကြီးမားသောဝေဟင်မှမျက်နှာပြင်ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်တွေ့ကာလက်နက်များသယ်ဆောင်နိုင်သောသာလေယာဉ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဖွံ့ဖြိုးရေးမူလ Carter ကအုပ်ချုပ်ရေးကာလအတွင်း "အဆင့်မြင့်နည်းပညာဗုံးကြဲလေယာဉ်" (ATB) ပရောဂျက်အောက်တွင်စတင်နှင့်၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည် B-1 Lancer သူ၏ဖျက်သိမ်းခြင်းများအတွက်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုပါ။ ATB ရေဂင်ရဲ့အစိုးရအတွင်းမှာဆက်လက်ဒါပေမယ့်သူ့ရဲ့မိတ်ဆက်စကားအတွက်နှောင့်နှေး ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်အဖြစ်ကောင်းစွာ B-1 အစီအစဉ်၏ reinstatement မှဦးဆောင်။ Program ကိုကုန်ကျစရိတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုတလျှောက်လုံးထ။ ဘိုးအင်းမှအကူအညီဖြင့် Northrop Grumman ကဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်စီလေယာဉ်ပျံ၏ကုန်ကျစရိတ်သည်အမေရိကန် (737 ဒေါ်လာအတွက်) $ 1997 သန်းပျမ်းမျှ။ စုစုပေါင်းဝယ်ယူရေးကုန်ကျစရိတ်အပိုပစ္စည်း, ကိရိယာများ, retrofitting, နှင့်ဆော့ဖ်ဝဲထောက်ခံမှုလည်းပါဝင်သည်သောလေယာဉ်နှုန်း $ 929 သန်းပျမ်းမျှ။ ဖွံ့ဖြိုးရေး, အင်ဂျင်နီယာနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းအပါအဝင်စုစုပေါင်းအစီအစဉ်ကုန်ကျစရိတ်, 2.1 အတွက်လေယာဉ်ပျံနှုန်း $ 1997 ဘီလျံခန့်ပျမ်းမျှ။
သောကြောင့်၎င်း၏စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအရင်းအနှီးနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ်, စီမံကိန်းကိုအမေရိကန်ကွန်ဂရက်၌န်ထမ်းများ၏ပူးတွဲစီးချုပ်များအကြားအငြင်းပွားစရာဖြစ်ခဲ့သည်။ အ 1980s ၏အဆုံးစွန်သောအဘို့ကိုအတွက်စစ်အေးတိုက်ပွဲ၏အကွေ့အကောက်များသော-Down သိသိသာသာဆိုဗီယက်လေပိုင်နက်ထိုးဖောက်နှင့်မြင့်မားတန်ဖိုးပစ်မှတ်တိုက်ခိုက်ခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုနှင့်အတူဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည့်လေယာဉ်, ဘို့လိုအပ်ကြောင်းကိုလျှော့ချ။ ကွယ်လွန်သူ 1980s နှင့် 1990s စဉ်အတွင်းကွန်ဂရက် 132 မှ 21 ဗုံးကြဲလေယာဉ်ဝယ်ယူရန်ကနဦးအစီအစဉ်များကိုလျှော့ချ။ 2008 ခုနှစ်, B-2 မကြာမီ takeoff ပြီးနောက်ပျက်ကျဖျက်ဆီးခံရနှင့်သင်္ဘောသားကိုလုံခြုံစွာထုတ်လိုက်ပြီခဲ့သည်။ 20 B-2s ၏တစ်ဦးစုစုပေါင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုလေတပ်နှင့်အတူဝန်ဆောင်မှုအတွက်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။
မူလကအဓိကအားဖြင့်နျူကလီးယားဗုံးကြဲလေယာဉ်အဖြစ်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသော်လည်း, B-2 ပထမဦးဆုံး 1998 အတွက်ကိုဆိုဗိုစစ်ပွဲအတွင်းဆားဘီးယားအပေါ်သမားရိုးကျဗုံး drop မှတိုက်ခိုက်ရေးမှာအသုံးပြုများနှင့်အီရတ်နဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်မှာစစ်ပွဲတွေအတွင်းမှာဆက်လက်အသုံးကိုမြင်လျှင်ခဲ့သည်။ B-2s ကိုလည်း 2011 လစ်ဗျားပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ (ဝီကီပီးဒီးယား)